Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Uhie nke Ubara Igwe China Manufacturer
Nkọwa:Direct Generator ugbu a,Nwere ike ịmepụta eletrik,Ntọala Redio
Direct Generator ugbu a,Nwere ike ịmepụta eletrik,Ntọala Redio
Home > Ngwaahịa > Ụlọ igwe / DC > Obere Igwe Grid > Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Uhie nke Ubara Igwe
Gaa na kandụl n'ọchịchịrị, nabata ike ọhụrụ, nkà na ụzụ ọhụrụ. Obere obere ụlọ obibi ike, ọkụ n'èzí, ike ụlọ, ngwa ngwa nwere ike imeju. Obere ọkụ ọkụ anyanwụ, mgbe ọkụ eletrik na-eji ike ọchịchị, mgbe ike kwụsịrị iji ike nchekwa, ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ndụ ndụ n'oge ọ bụla. Nwere ike igbanye ọkụ eletrik , nke na- emepụta ihe dị ugbu a , iji zute ọtụtụ mkpa. Mgba ọkụ mberede n'èzí, obere nha, dị mfe ibu, ihe egwu MP3, redio na ọrụ ndị ọzọ.
N'ụbọchị ahụ, a na-ebubo ike anyanwụ, nke na-azọpụta ike ọhụrụ ma nwee ahụike na gburugburu ebe obibi. Green 0 ọnụahịa, na-ekwu na-adabaghị na ike elu ikike ndenye. Ngwá ọrụ ndị dị elu, nke nwere ike ịdịgide ruo afọ 25, nwere ike ịnweta mgbasa ozi redio karịa 20 ọwa. Redio redio setịpụrụ .
Mmetụta ime obere oge. Iji mee ka ọ dị mfe maka ndị ahịa iji na-ebu ma na-agagharị na uche, anyị na-emepụta ngwaahịa anyị dị ka obere. A na-ahụ n'ihu na n'akụkụ nke usoro ọkụ na astigmatic na oriọna ọkụ ọkụ, nke mere na ndị ahịa nwere ike ime mgbanwe na gburugburu ebe obibi. 5W nnukwu arụmọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, bụ nke ike anyanwụ na-ebubo n'ụbọchị, dozie nsogbu nke ọkụ eletrik n'abalị. Ngwunye usoro ike nke na-egbo mkpa obere ike, usoro ike nke anyanwụ na-echekwa ọkụ na nsogbu ndị ọzọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha, nhọrọ nkwụsị n'ụlọ